Cusbitaalada Sweden oo la dhaliilay | Somaliska
Cusbitaalada Sweden ayaa lagu dhaliilay ciriiri iyo farsamo xumo. Idaacada Sveriges Radio ayaa soo tabisay in cusbitaalada uu ka jiro ciriiri aad u faro badan iyadoo arintaas horey loo mamnuucay. Cusbiitaalada qaarkood ayaa la sheegay in ay sariiraha bukaanka dhigaan goobo aan ku habooneyn sida wadada iyo masqulaha.
Sidoo kale qaar ka mid ah hospitalaada ayaa waxaa hore loogu dhaliilay farsamo xumo iyadoo dhowr jeer si qaab daro ah loola dhaqmay dadka daryeel doonka ah.
Soomaalida ayaa ka mid ah dadka dhibaatada ugu weyn iyo jahwareerku ka haysto cusbitaalada iyada oo marka ay dhaqaatiirta u takaan lagu yiraahdo “biyo badan cab”. Dad badan oo aan la kulmay ayaa arintaas walaac ka muujiyay halka kuwo kale ay sheegeen in aysan dib dambe u tagi doonin cusbitaalada.
Inkastoo nidaamka caafimaadka uu kala duwan yahay wadankaan iyo Soomaaliya oo si taxadar la’aan ah dadka daawada loogu qori jiray ayaa hadana mararka qaarkood waxaa la dhihi karaa dhaqaatiirta ka shaqeysa cusbitaalada Sweden in ay yihiin kuwo aan tixgalinta saxda ah siin bukaanka.
asc walalayaa dhamaantiin waxaa xaqiiqo ah in soomaalida halkaan joogta aysan wax tix galin ama daryeel caafimaad ku haysan 100 kiiba 75 waayo waxaan tagay dhawr mar cisbitaal anigoo tabanayo xanuuno kala duwan waqtiyaduna aysan isku dhawayn kadibna waxaan la kulmay mid ka mida waxyaabah aad hada ka dhawaajiseen ee ah biyo cab waxaa su,aal ah xanuun biyo ma daweeyaan xanuunada qaarse biyo la cabo ma anfic karaan inay daweeyaan. waxaanku soo gaabinayaa hadalkayga ilaahay wadankeena maslaxo haka dhaliyo waliba caama aamiin aamiin
Fuck sweden says:
October 3, 2011 at 02:17
Jimcaale sidaad war usoowaday warka jahiliinta maakentay biya cabaa nooladhahayaa kuwa dhahayeen adiga iyo dhaqtarkaba fuck of iyo jahiliinta waa idiin wada cabayaa kkkkkk wakugudaadsantahay maanta warkan maxaa usoogalisay kaataagantahay
Fikrad lala dhacay 20 4
War jimcaale seey kaa noqotay waxaad aheed nin aqyaar ah oo aqoonyahan ah. ma waxaa soo qaadatay sheekadi dadki jaahilinta ahaa ee somalida ka mid ahaa oo dhahahaayey biyo cab ayaa nala yiraaa. Dhaqtarka asagaa go aamiya dawada qofka ku haboon, hadii daawo u baahanyahay bukaanka iyo hadaanu u baahneen. Laakin somalida dhaqankeeda ayaa ah dhaqtarkii dhaho cudur ma qabtid ma jeclo oo waa ay caayaan waxna ma yaqaano ayey yirahdaan laakiin waxay dhaqtar u yaqanaan ninkii bac daawo ah oo qarash badan u soo qoro, xanuuno badan oo uusan qabina ka sheego. Waxaa loo baahanyahay in umada aad garaadkooda kor u qaado ee maha in aad u celiso Jahligii somaliya ka jiray ee laga soo gudbay. Tusaaale waxa jiro cuduro viral ah ama virus sababo kuwasaas oo aan suro gal aheen in lagu daaweeyo daawo caadi ah, madama viruska cudurada uu sababo aaneey daawo laheen laakin badanaa nasiib wanaag waxaa ka adkaada difaaca jirka( hadii uusan aheen viruska halista ah sida HIV) hadii qofkaas la yiraahdo daawo uma baahnid ee difaaca jirkaada sare u qaad nafaqada badso biya badan cab ma qaladbaa? qofka somaliga ah inta uusan dhaqtarka u tagin asaga ayaa is dhaqtaro oo cudur aanu qabin ín uu qabo iska dhaadhiciyo markaasuu rabaa in dhaqtarku yirahdo cudurkasaa qabtaa ma tiisaa loo raacaa? aniga uma doodayo dhaqaatirta Sweden laakiin waxan la yaabay waxi aan somaida ku aqiinay oo jahliga ku saleesnaa oo halkaan ayaga oo ku daabacan aan arkay fajacisana igu noqtay. Ugu dambeen umada yaanan u horseedin jahli ee aan ka wacyi galino jahliga una horseedno sida ay ula qabsan lahaayeen wadamadaan horumaray ee ay yimaadeen.
Dood kulul. Ka Jawaab? 11 11
Asc dhamaan asxaabta , wey jirtaa in isbitaalada sweden ay ciriri yihin ama qofka ay ku qadato waqti dheer inuu la kulmo dhaqtar-ka specialist- ah,taasna waxaa ugu wacan dadka swedish-ka ah oo u badan dad da’ ah oo u bahan daryeel cafimaad markasta.sidoo kale biyo cab wey jirtaa waxana u badan marka aad hergab qabto waayo hergabka waa virus, virusna dawo malahan, oo qofka waxa laga daweyn karaa Bacteria.
ayaan södertalje says:
asc marka hore dhamaan .
aniga hadaan figrigeyga hadaan dhibto sweden waxaan ku noolahay mudo 10sano ku dhaw aan waliba uba dku dhaxkorshay sweden anigu ma qabo in aysan olin daawo waa best land wax kale iska dhafee xibno ayeey inogu badaleen biyo cabna waa lagu oran dee hadii adan xanuunsaneen waxaad u baratay wan jiranahay dawo soo qado qab isku sii war hebalow noo aad dhaqtarka dawadii lagu soo qoran kaual cunayaa wah somali maryoley xalkeeda wax kale iska dhaaf waxey hada subiyaan qofka cayilan ana is cateyn karin iney caloosha ka xeran haye hadiise aad xanuunsan tahay toos u aad ukutka ha isku adin ispitalka xafada waa dhaqtar gud waxweyna ku qaban maayo luqada hadii adan aqoon wado qof luqada kasaayo isku aadi habeen jimco ah beri sabti tahay waxaa jiro xita prevat oo aad tagi kartaa oo ah qas kan haweenka iyo kuwa kaleba toos aad u wacan kartaa balan ka subsna kartaa waxaa telka aad ka qadna kartaa vardcetralka iyaga aya aku sheegi karo u sheeg meesha laaga haayo hadii baritan gud rabtana tag akutka ayi dhaqtar aya ajogo ama avardcentral ku sheeg i gudbi dheh mid qas ah mudada waa 3weeks kadib baalan ayaad helysaa marka wjaiya a ajiro oo wadanka leysku daweyn karo ee see idinla ay un hasoo qorina dadka wax idin soo shegayo iyagana aqoon sida leysku daweyo ama dhaqaatirta loala hadlo by.
run ahaanti sid ay ila tahay wadankan dawo ahaan markii yurub loo fiiriyo waxa uu ka mid yahay wadamada dhexe inkastoo laga horeeyo hadana inka ka danbayso aa badan marka mida kale somalida 20 sano udanbeeyay fowdadii waadan ka dhaqaatiirta waxay u qorayeen dadka daawo uu qandaraas ku sooqaatay marka dadkeyna taas ayay laqabsadeen marka wadankaan dhaqtarka iska ma qorikaro daawo sababtoo ah waxaa ku socda dabagal iyo koontorol dhibka nahaysta ay ka mid tahay marka ha la iska dhaafo dayaadada wax la hubo halagu dacaayadeeyo mida kale cudurka ku haayo hadaaaaad aragto oo wax lagaaga qaban waayo waad aadi kartaa wadamad ku hormaray sida germalka iyo wxii la mid ah ma hadsanidiin
Dhamaantiin waa salamantihiin.
arinta aad ka dhawaajiseen ee dhakhaatiirta wadankan waxaad ku arkaysaa waxyaalo aad loola yaabo waxa ka mida waxad arkaysaa qof qaliin lagu sameeyay oo saacado gudahood lagu leeyahay Isbatalka kaga bax oo hurigaaga jiif wax dawo ahna aan la siinayn xataa balandanbe oo muraajaco ah oo lagula socdo xaalada qaliinkiisa lama siinin.
Aniga laftarkayga waxa igu dhacday in aan barafkii ku dhacay oo aan xubnaha
xubnaha qaar ka jabay kadibn aan Ambalace dalbaday dhakhaatiirtii isbatalku waa i kabeen kadibna waxay igu dhaheen gurugaagii aad biyo badana cab waxan ka codsaday iin ay dawo xunuun biiso ah isiiysaan kadib waxay igu dhaheen pharmaciga barito ka gado waxan u sheegay in waqtigu habeenyhay oo ay xiranyihiin kadibna afar xabo oo banadol ah ayay isiiyeen .
waxay ii sameeyeen balan danbe balantii markii aan ugu leebtay waxay igu dhaheen gurigaagii tag oo iska fur biyo badana cab.
calaa kuli xaal magaranayo in ay dhayalsi iyo neglegence ka tahay iyo in systkoodu didaas yahay waxanse kala kulmaysaa waxyaalo aad aad ula yaabto.
maaha wax saxa in marka wax laga hadlayo lagu qiimeeyo ama tusaale loosooqaato dalkeena burbursan oo kaliya ee aduunyada kale wax ku qiimeeya waxan filayaa in aanay sax ahayn lafo jabay in biso badan oo la cabo lagu dabiibi karo.
Asc dhamaan dadka somaliyeed oo meelkasto ku nool aduunka dacaladiisa . Hadii aan kahadlo figrad ahaan deyda,
Hospitalada Swedan kubaanka la keeno aan u kalaqaadno 2 qeyb
1dadka rer swedesh
2dadka magan galyo donka ku ah , su aasha waxa eytahay, hadii aytahay somalida kaliyah ee ku nool dalka Sweden in dr uu usooqoro biyo qofkiina uu yahay qof xanuun sa ‘id ah daremayo waa in loo soo qoraa daawo ku haboon xanuunka haayo qofkaas
qofka xanuunsan xaq waxa uu u leyahay in uu helaa daawo hadii eysan dhicininuu helo waxa uu heystaa car cafimaad oo meel asto iska ga daweynkaro sidaas dardeyd ha isdhihin waxaa u xiran tahay dowlada Sweden Europ hadii aad fahmi wyso kadag meshaa si aad u hesho daawo ku haboon caafimadkaada ……
Salaan Sare arint ahalkaan lagu so qoray waa dhibka noogu weyn nagu heysta sweden gaar ahan Stockholm Shan Jeer ayan tagay sjukhus waxeey igu dhahaan markasta biyo cab marka wa in aan ka mudaaharaadna arintaan Gabar ila dagana maalin hore tagtay iyadana sido kale aya lagu dhahay
Hodan walashis wan ka xumahay haddii aad dhib kala kulantay dhaqtar-ka, laakin waxan ku shegi lahaa dhaqtarka marna ma didayo inuu qof daweeyo waayo dhaqtarka markasta qarashkisa dowlada ayu ka qadanayaa. laakin waxa jirto wax yaabo badan oo sabab u ah, in qofka aan dhaqso la daweyn,tusaale ahaan sweden qofka marka lagu arko hal cudur oo dawoyin u bahan isla markii dawo maloo qoro qofka oo waxaa laga baraa cudure kale, oo keeni kara cudurkaan taasna waxay qadataa waqti sidoo kale waxaa muhim ah in qofka bukaanka ah uu dhaqtarka si ficaan ugu sharaxo dhibatooyinka heysto.
asc dhamaan dad weynaha ku nool sweden waxaan idin
dhihi lahaa anigaba waan soo maray waxaas ee waxaa sameesaan lacagta oo kaliya ayey dadka ka qaataane alaah kabarya caafimaad isaga haya caafimaade gaal caafimaad mahayo ee iska samra insha alaah
Asc dhamaan akhyaarta waan salamaaya idilkiin hadii aan fikirkayga ka dhiibto anigu dhakhtarada sweden ilaa iyo xad waxaan filayaa inaysan siin wax tix galin qofnimo soomalida kolay dadka kalana way laqabaan hadii aan qudhayda iska hadlo kalharo oo qabow igalay waxaanba goostay inaan u baqoolo dhankaas iyo addis ababa ethoipia la aado markii aan shangoor ku laabtay cusbitaalka ay idhaheen biyo badan cab waxaanba ka baqay inay i khaarajinayaan markaa yaan lala yaabin wadankan ma jecla in lagu daweeyo sidii saxda ahaydna laguugu faa iideeyo salaama dhamaan tiin
Oto dheere says:
Ugu horeen waad salaaman tihiin Dhamaantiin. Bacdasalaan aniga fikir keyga hadaan ka hadlo waxaan oranlahaa. horta caafimaad alle umbaa hayee qofkii bukow midaa aamin. Mida kale Somaalida jiilka maanta jira xanuuna uma roona caafimaadna uma roona.
October 3, 2011 at 03:29
Maxaa yeelay wax haba yaraatee eynu ka mahad sheegi ayaanba jirin dhaliil mooyee hadeynu somaali nahay. Sweden wey leedahay dhakhaatiir &waliba isbitaalada ugu wanaagsan aduunka laakiin inagaa jaahiliin ah mar walbana wexeynu jecelnahay dagdaga.
waayeelka jaqaafsada says:
as ckm mr jimcaale salaan sare ,waxaa kale oon salamayaa jimcaale waad ku mahadeasan tahay moowduucyada aad ku so dartey sxb webka wuxu noqdey meel ey wax ma garato ey aflagaado ka sameyso ee FG sxb u yeelo dadka wuxuushta ah ee wax ma garatada ee cayda soo qorayaan fadlan naga ilaali dadka soo dhiibanayaan af lagaadada meeshu waxey nqoqtey CASA DI CASINI fadlan ha noo gudbin kuwa dacawa shiirka soo qorayaan byyyyyyyy
BY WAAYEELKA JAQAAFSADA
Asc dhammaan, kadib walaalayaal arinta ku saabsan xarumaha fayo-dhowrka ee waddanka Sweden wey jirtaa in ay liidan yihiin oo aysan xilweyn iska saarin Bukaanka soo doonta daryeel caafimaad sida in ay darsaan dhibka uu sheeganayo waxa sababay kadibna ogaadaan cudurka una qoraan dawo ku haboon, waxaa moodaa in Takhaatiirta waddanka ay ku liitaan cilm-nafsiga waayo waa udub dhaxaadka dawaynta qofka bukaanka ah waana in loo daryeelo si maskixiyan ah. Hadda ka hor ayaa gabar xanuun satay waxa ayna aamintay in uu bahal caloosheeda ku jiro dhawr takhaatiir ah kolka ay baareen waxa ay ku yiraahdeen waxba ma qabtid taa ma aysan aaminin kumana bogseen xanuunna ma daaynin, aakhirki ayaa waxaa daweeyay dhakhtar cilmi nafsiga wax ka yaqaano qaliin been abuura ahna ku sameeyay bahalna usoo diyaarsaday dhalona ku riday kolka ay soo naaxdayna ku dhahay bahalkan ayaan kaa soo saaray sidaa ayayna ku caafimaaday kuna huraday!
Mararka qaar waa muhiim in dadka si maskaxaysan loo daweeyo. Mahadsanidiin.
waan idin salamay waa sax arinta uu ka hadley wiilkan qorey waxaad moodaah in uu in badan u kuurgalay isbitaalada swedan waa sax anigaabo ku wareerey waxaan taaganahay in aan u raadsado wadamo kale markaan waayey wax xanuun keyga wax ka qaban waayeen mabo isku taxlujinayaan in ku daaweeyaan marka dadka kasoo horjeedo xaqiiqda saxda ah waxaan usheegayaah in ay tagaan isbitaalada markaas fikir saliin ahna ka baxsadaan idin leeyahay
Sc dhamaan walaalaha soomaaliyeed.
Hadii aan fikradeyda kadhiibto. Aniga waxaan dhihi lahaa cilmiga hala kaashado waayo dawadu beys ayey leedahay, jirkana xad ayuu leeyahay. Marka hadii dhaqaatiirta u arkaan in waxa qofka haya inuu yahay jiro iskeed ubixi karta daawo la’aan oo aysan qofka kuheynin qandho, matag ama calaamado kale oo qofka udiidayo inuu seexdo markaa taasi dawo uma qoraan mana loo baahnaba waayo waxaa laga ordayaa ama ladiidayaa in dawadu jirka barato ama ay raad kale qofka kureebto. Qaar badan oo dawada kamid ah ayaa dadka ku reeba calaamado ay kamid yihiin inuu dhagaha qofka cuslaado ama kuwa kale oo aanan markaa gadaal laga dareemaayo. Balse hadii virus ama bacteria meesha kujirto islamarkaana ay bakteriyadu tahay gram positive islamarkaana wadata cilaamadaha kor kusoo sheegay taaso dawo waa loo qorayaa laakiin hadey tahay gram negative islamarkaana aanan wadan calaado daran oona loo arko inuu jirka iska difaaci karo kaasi iskii ayuu ubaxayaa.
Waxaa kaloo jira labadaa arin mid kaduwan oo ah tusaale ahaan qofbaa qanjirada cunaha bararey, waxay soomalida tiraahdaa quun, qofka wey muuqataa in ay qandho daran heyso cunaha uu bararsan yahay markii dhaqtarka uu tagey waxaa lagu yiri biyo badan cab jalaatana cun , marka qofkaa wax weyn baa loo qabtay, biyaha kaalin weyn ayuu kaqaadanayaa wareega dhiiga iyo nadiifin cunaha ahba. Xaga jalaatadana waxaa la ogaaday in uu xanuunka qofkaa hayo inuu yahay mid jawiga qabowga keeney islamarkaa hadii antibiotic lasiiyo, wuu ubaahanaa mar weliba oo xiligaa lagaaro wuuna soo noq noqonayaa cudarkaa marka jalaatada waxay kacaawineysaa iney meesha dhiban dul dhigto mid katan weyn sidaa waxaa ku laciifaya dhibkii jirey waana cilmi gadaal laga ogaaday islamarkaana aan loo isticmaali karin wadamada kuleelaha kajira sida wadankeena oo kale.
Hada kahor waxaa dhacday anigoo kashaqeynayey isbitaal wadankeenii hooyo in wiil xanuunsanaa oo gastric uu dhaqtarka uqorey faleebo cusbo ah oo weliba ah nooca Ringer loo yaqaano waana cusbo adag. Waxaan horey u ogeen in qofka cusbada ay dhibeyso. Waan weydiiyey dhaqtarkii sababta uu sidaa usameeyey, anigoo maskaxda igaaga jiratay inuu qaldamay oo uu magaca isku qalday mash-quul awgii. Si hoose ayaan uweydiiyey anigoo nadaamka raacaya islamarkaana ogeen qoyska bukaanka. Wuxuu iigu jawaabay waad runtaa laakiinse waa laga daba yimid oo cilmi kale oo fasaxaya ayaa yimid ee hadhow iigu kaaley xafiiska ayuu iisii raaciyey. Sidii balanta aheyd dhaqtarkii wuxuu lasoo baxay buug sanadkaa soo baxay oo aad u amaanaya talaabada uu qaaday. si kastaba ha ahaatee waxaan dabagaley falka kadhalan doono markii daawada qofkaa qaato. Markii faleebadu bilaabatay dhowr daqiiqo kadib wuxuu bukaankii bilaabay qeylo iyo matag kabadan intii hore iyo inuu matago dhiig waan naxay dhaqtarkii ayaan kulaabtay, indhihiisa ayuu ku arkay, wuxuuna yiri waa loo baahan yahay waa xanuun hada ku eg oo aanan dib usoo laaban doonin.
Yaanan hadalka kuugu daalinin sidii dhaqtarku sheegay ayey arintu noqotay willkii oo laba bil kastaba ladaaweyn jirey ama laga soo nuugu jirey acid-ka waa uu kabogsoodey.